Mila Kunis Oo Qaawan Oo MAGAALO LEH Ka Qaaday Sawiro Gaar Ah & Muuqaal Muuqaal Ah Oo Laga Duubay Telefoonkeeda Gacanta - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Mila Kunis Oo Qaawan Oo MAGAALO LEH Ka Qaaday Sawiro Gaar Ah & Muuqaal Muuqaal Ah Oo Laga Duubay Telefoonkeeda Gacanta
Fiiri ugu fiican ee Mila Kunis sawiro qarsoodi ah oo qarsoodi ah, dusha sare, bikinimo, iyo sawiro sexy ah oo aan halkaan ku hayno, oo ay weheliso muuqaalkeeda ugu fiican ee lesbian iyo galmada. Sidoo kale, waxaan helnay Muuqaal Muuqaal ah oo la yiraahdo Mila Kunis oo laga duubay taleefankeeda gacanta!
Mila Kunis (34 jir) waa atirisho Mareykan ah. Waxay caan ku tahay doorarkeeda 'Taasi' 70s Show ',' Black Swan ',' Saaxiibada waxtarka leh 'Iyada oo ay la socdaan Justin Timberlake,' Ted ', iyo filimkeedii ugu dambeeyay ee' Hooyooyinka Xun '.Waxay ku dhawaaqday Meg Griffin taxanaha 'Qoyska Guy'. Cudurka irid-xanuun ee joogtada ah oo sababay indho-indheyn ku-meel-gaar ah oo hal il ah, sidoo kale indhaheeda ayaa midabbo kala duwan leh, mid waa bunni kan kalena waa cagaar. Gabar yaab leh. Waxay la kulantay gacaliyaheeda Ashton Kutcher sanadkii 2012, hada wey is guursadeen waxayna heystaan ​​wiil iyo gabar.
Mila Kunis ayaa siideysay fiidiyow galmo ah
Yaab, yaab! Halkan dadweynow waxaan haynaa cajaladdii dhabta ahayd ee Mila Kunis ee galmada oo ka soo dhacday taleefankeeda gacanta! Markaad riixdo ciyaarta waxaad arki doontaa Mila Kunis da 'yar oo dhab ahaan buurbuuran. Waxaan u maleyneynaa inay tani ku dhacday nin nasiib darro ah! Sikastaba, dhagsii badhanka cagaaran ee dhamaadka horudhaca si aad u daawato fiidiyowga buuxa ee Mila Kunis ee fiidiyoowga ah ee bilaashka ah!
Mila Kunis qaawan sawiro xaday
Sawirro qaawan oo qaawan oo Milani Kunis iyo sawiro gaar loo leeyahay ayaa khadka tooska ah ka socda, lagana xaday taleefankeeda oo dhawaanahan la dusiyay, marka hada waxaad ku wada arki kartaa Mostra Musa! Mila Kunis ayaa dhalaashay shimbiraha qaawan ee qaawan iyo badhida. Dhammaanteen waan arki karnaa nacasyadan waa duq, sababta oo ah waxay u muuqataa in yar oo iyaga ka yar.
Waxaan rajeyneynaa in tigaheeda ay umuuqdaan isla markii ay umushay labo caruur ah, laakiin kaliya way ka fiicnaan karaan kana weynaan karaan!
Mila Kunis oo muuqaallo kacsi iyo galmo isugu jira
Mila Kunis ayaa la arkaa iyada oo sariir jiifa, ka dibna taagan meel qubeys ah sida nin qoorta u sudhay qoorta. Kadib wuxuu bilaabaa inuu la soo baxo iyada ka hor inta aysan ugu dambeyn sariirta ku dhicin. Mila iyo ninkeedu xoogaa ayey is rogayaan, iyagoo si fiican inoo siinaya naasaheeda qaawan. Ibta Mila way madoobaatay, nasiib!
Muuqaalka soo socda, Mila Kunis wuxuu ku fadhiyaa qaawan sharooto shabag ah oo ka baxsan bannaanka hore ee qubeyska. Jilibadeeda waxay u jiiday laabta si aan u aragno xoogaa kala-bax ah oo soo baxa.
Muuqaalkan caanka ah, jilaaga reer France ee Vincent Cassel ayaa milateriga xafiiska ku dul shubaya Mila Kunis. Natalie Portman ayaa daawaneysa iyaga waxayna ismoodsiineysaa meesha Mila ’! Kunis wuxuu gashanayaa rajabeeto madow wuxuuna la taahayaa sida xiddig dhab ah oo jilicsan. Waxaad ubaahantahay inaad go aansato cida uquudi laheyd halkii, kuleylka iyo waallida madow ee Mila Kunis ama indho sarcaad quruxsan Natalie Portman, oo qaawan iyo fiidiyowyo qaawan halkan ayaan ku haynaa?
Mid ka mid ah muuqaalada ugu wanaagsan uguna kulul weligood ayaa halkan yaal! Waxaan ka hadlayaa Natalie Portman iyo Mila Kunis fiidiyaha lesbian-ka ee laga soo qaaday filimka epic. Kunis iyo Portman ayaa soo baxayay markii ugu horeysay, ka dib Mila ayaa iska bixineysa surwaal casaan ah oo Natalie ah waxayna hoos ugu dhaadhacaysaa inay leefleexdo farkeeda! Portman wuxuu ku raaxeeyaa kuna raaxeeyaa afka Mila!
'Saaxiibada Waxtarka Leh'
Waxaa jira muuqaalada ugu caansan ee Mila Kunis. Maaliyadeeda ayay madaxa ka jiidanaysaa si ay u muujiso rajabeeto madow iyada iyo Justin Timberlake oo dharka iska dhigaya. Kadib waxay ku galmoodaan sariirta, Mila dusha ninka muddo ah, kahor intuusan hoostiisa dhigin go'yaasha si uu ugu dul dego iyada. Iyadu markaa si lamid ah ayay ku samaysaa isaga.
Mila Kunis Kulul oo ku dhex jirta muuqaallo galmo oo lala socdo Timberlake, oo ku dhowaad muujinaya naasaheeda. Iyada iyo ninka waxay ku galmoodaan jagooyin kala duwan meelo kala duwan. Hal dhibic waxaan ku aragnaa badhida qaawan, laakiin waa jidh labalaab u ah Mila.
Mila Kunis ayaa mar kale dhabarka jiifa sariirta iyadoo ay ku jirto gabal gabal yar iyo saraawiil. Waxay muujineysaa xoogaa kala-goys ah, maadaama Justin uu lahadlayo in muddo ah. Mila ayaa markaa istaagaysa, aakhirkiina shaadh xidhanaysa.
Mila Kunis sexy iyo bikini sawiro
Fiiri qaar badan oo ka mid ah sawirada kulul halkaasoo Mila Kunis ay ku muujisay bikinkeeda iyo sawirka sare. Naagtan waa mid ka mid ah kuwa ugu shidan filimada, sidaan horayba ugu baran jirnay, waxay u muujisaa jirkeeda si qaawan qaawan baahiyaha filimada. Kunis wuxuu na siiyay jidh aan dhammaystirnayn, halka ay bisadaheeda gacmaha ku haysato. Kadib bikini iyo toogasho sawir galmo ah.
Soo Koobistii Kennedy
Jessica nigri lulataaye been abuur ah
laura san giacomo sawiro qaawan
Francesca Sofia Novello qaawan
Jennifer sawiro qaawan cirro